प्रकाशित मिति: June 30,2018
१५ असार – संसदमा रेल र कम्युनिस्टको किस्सा सुनाउने कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल आउने विषयमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘विद्वान भनेको विद्वान नै हुने रहेछ, उहाँलाई तिथिमिति समेत याद छ । रुसमा रेलको ड्राइभर को थियो भन्ने पनि याद रहेछ,’ विनियोजन विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफपछिको प्रतिप्रश्नको जवाफमा ओलीले भन्नुभयो, ‘म भन्न चाहन्छु- नेपालमा रेल आउँछ, आफ्नै रेल कुद्छ ।’
आफूले नयाँ कुरा गर्दा केही मान्छेले अनौठो मान्ने र केही झस्किने गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
‘रेलसँग झस्किनेको दुईवटा कुरा बुझिनँ, काठमाडौंमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा यो गरीब देशमा को उड्छ, भन्ने थियो, अहिले विमानस्थल सानो भएर हैरान छ, अरु बनाउँदैछौं,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘कोदारी राजमार्ग बन्दा उधुम विरोध भएको थियो, राजा महेन्द्रले भनेका थिए– गाडी चढेर कम्युनिष्ट आउने होइन । त्यसबेला कम्युनिस्ट प्रतिबन्धित थिए ।’
ओलीले मलेसियाका महाथीर मोहम्मदले ट्वीन टावर बनाउँदा उधुम आलोचना भएपनि अहिले त्यो अर्थतन्त्रको गढ बनेको समेत बताउनुभयो ।
‘महाथिरले ८० किमि टाढा विमानस्थल बनाउँदा त्यति टाढा हवाइ मैदान बनाएको भनेर आलोचना भएको थियो । यहाँ ६ लेनको बाटको किन चाहियो भन्छन् । केहीले नबुझेर विरोध गर्छन् । चन्द्रशमशेरले त्रिचन्द्र कलेज बनाएपछि, आफ्ना खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हान्दैछु भनेर बुझेरै हो । विद्वानको विरोध त्रिचन्द्र बनाउँदा नबुझेजस्तो हो ? कि मैले मेसो नपाएको हो यो ?’
त्यसअघि रिजालले रुसमा रेल र कम्युनिस्ट पार्टीको कथा सुनाएका थिए । स्टालिनका पालामा लिकविनाको रेलको कुरा भएको भन्दै उनले नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले स्वदेशमा रेल नबने अर्काको देशको रेल आफ्नो भन्ने कि ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।